Indlela yokuhlambulula isisu kunye namacala emva kokuziswa ngexesha elifutshane ekhaya. Indlela yokunciphisa umthamo umntu kwaye ususe ngokukhawuleza i-fat from esiswini ngokuzivocavoca
Bathi umfazi wesimanje kufanele abe "phezulu". Kodwa nangona ukwakheka okufanelekileyo kunye nomnsalo wesitayela, kunzima ukuzivakalelwa njenge heroine yephepheni ebomvu, ukuba amaqhopholo eswini ekhohliswa phantsi kwesibhakabhaka esicacile. Ngezihlandlo ezinje, ngokukhawuleza ufuna ukukhawuleza ukunyuka kwesisindo, susa amanqaku alula kunye neenqatha kwisisu, qinisa iesile uze ufumane imilenze emilenze. Ukuphindaphindiwe kukubonga abantu abadlula. Kodwa, ngelishwa, akuyena wonke umntu owaziyo ukucoca isisu kunye namacala emakhaya ngexesha elifutshane. Imizamo engenamsebenzi yokunciphisa ubunzima emva kokubeleka okanye isigaba sokugqibela siphelela ekuhlulekeni - kwaye kwihlabathi kuba ngumfazi omnye ohluphekileyo. Ukuze singavumeli intlekele yendawo yonke, siza kuxela indlela indoda kunye nomfazi abalahla ngayo imiba yengxaki ngeveki ngoncedo lokuzilolonga, ukutya kunye nemikhwa efanelekileyo.
Indlela yokususa isisu esiswini kunye namacala emakhaya ngexesha elifutshane: iingcebiso eziphambili
Izindlela ezigqithisileyo zokulahleka kwesisindo esiphuthumayo ngendlela yokutya okunzima, ukunyusa umzimba kunye nokuxhaswa kwezinto eziphilayo. Ziyasebenza kwaye zisebenzayo, ukuba zisetyenziselwa kunye nenani lezinto ezinomsebenzi, kodwa kungekhona ukungahambisani nazo. Ukuze ugweme iimpazamo eziqhelekileyo kwinkqubo yokulahlekelwa ubunzima, kuya kufuneka ufunde iziphakamiso ezisisiseko malunga nendlela yokucoca ngamacala kunye nesisu esisemzini ngexesha elifutshane.
Gwema uxinzelelo kunye nokuxhalabisa. Kwiimeko ezixinzelelekileyo, inkqubo ye-endocrine ivelisa i-hormone cortisol, egalela ekuhlanganiseni ubuninzi be-fat in the area;
Ukunciphisa inani lotywala oludliwe. Utywala kwakhona kwandisa izinga le-cortisol, elichaphazela kakhulu inqeni kunye neenqatha;
Nika ukutya okutyebileyo kunye nokuthosiweyo ngokutya okanye ukutya okunempilo. Musa ukulibala, umzimba kufuneka uchithe amandla amaninzi kunokuba uyamkela. Ngaphandle koko, ukulahla isisu kunye namacala ngexesha elifutshane ekhaya akuyi kusebenza;
Faka phakathi kokutya okudliwayo inani elona libomvu nemifuno eluhlaza ngaphandle kwesitashi. I-Fiber, ekhoyo ekubunjweni kwayo, inomthelela ekunciphiseni kwangaphambili ubunzima bomzimba;
Nciphisa imenyu kunye neentlanzi ezincinci zintlanzi kunye neenkukhu, irayisi eluhlaza kunye nesonka esipheleleyo sesonka;
Phuza ubuncinane ii-2 ilitha zamanzi okusela ahlambulukileyo ngosuku. Ngaphandle kokungena kwamanzi rhoqo emzimbeni, i-metabolism iyancipha, kunye neekhalori ezidliwe ziguqulwa zibe yintsifo enqamle kwisisu nangamacala.
Ungasusa njani i-fat from esiswini kwaye ulandele ngoncedo lweemveliso eziqhumisayo
Iimveliso ezivuthayo ezidumileyo zithandwa kakhulu phakathi kwabasetyhini: ngoncedo lwabo unokususa amanqatha esiswini nasemacaleni, ngaphandle kokulimaza umzimba. Yintoni engenakuthiwa ngamacwecwe amacwecwe, iipsulules kunye nama-creams ukulungisa imiba yengxaki. Phakathi kwamafutha atshisayo ngamaziko:
Amanzi amaninzi okusela - akhula imetabolism. Phuza ingilazi kwisisu esingenalutho kunye ne-150-200 ml imizuzu engama-20 ngaphambi kokutya;
Itiyi elihlaza - likhawuleza i-metabolism kwaye ixinzelelo kwiindonga zesisu, ngaloo ndlela idala ukuvakalelwa;
Ilayisi ihlambulula umzimba wee-toxins kunye ne-toxins;
Iiprotheni inyama kunye neentlanzi - ukwanda kwe-muscle mass, ukunciphisa umthamo we-fat deposits;
Iimveliso zobisi eziphantsi kweekhalori - zitshisa amafutha amaninzi;
Iziqholo ezinobungozi - ukusabalalisa i-metabolism, ngokunjalo kuncedisa ekulahlekeni kwesisindo esiphuthumayo;
ULwandle kakade (laminaria) - londla nge-iodine, lugxininisa umsebenzi weengqungquthela ze-endocrine;
I-Grapefruit - iibhloko ze-receptors, enikeza uphawu malunga nomoya wonyaka;
I-cafeine - iqinisa ukunyamezela ngexesha lokuzikhandla ngokomzimba.
Indlela yokunciphisa umzimba kwaye ususe isisu emva kokubeletha
Ubuhle yisona sikhali esibalulekileyo sowesifazane. Kwaye umnqweno wokuzala umntwana ngowona nto ephambili. Ngokuqhelekileyo kuyimfuneko ukunikela umbingelelo wokuqala ngenxa yesibini. Kwaye emva kwexesha ixhatshazwa yimibandela, indlela yokunciphisa umzimba kwaye isuse isisu emva kokubeletha. Kodwa lo msebenzi awulula. Kwiinyanga ezili-9, izidumbu ezisendongeni zangasese zangasese zazisetyenziselwa ngokusesikweni, kwaye ukuba zibuyele ngokukhawuleza eziqhelekileyo, kufuneka kwenziwe umsebenzi omningi. Ewe, isantya sokulahlekelwa isisindo nokukhupha isisu esisemva kwesisu kuxhomekeke kwizinto eziliqela:
Ubungakanani kunye nohlobo lwesimboli ngaphambi kokukhulelwa;
Inani leekhigram eziqokelelelwe ngaphezu kweenyanga ezili-9;
Umgangatho womsebenzi ngexesha lokukhulelwa;
Ukuthambekela komzimba kunye nemfuza;
Ngokuqinisekileyo, kuya kuba lula ukulahlekelwa isisindo kwaye ususe isisu emva kokubeleka, ukuba ukukhulelwa kwaba ngowokuqala, ukondla, kunye nenqanaba lokuzuza kwisisindo alizange lidlule uphawu lwe-13 kg. Kodwa nangona yonke into ingabonakali kakhulu, unokukrazula amacala kunye neenqatha esiswini sakho ngokusebenzisa nokutya ngokufanelekileyo. Yaye ukuba yonke into icacile ngokutya okunempilo, ubunzima bokuzivocavoca kufuneka bafundwe ngokucophelela.
Ukuzivocavoca ukuphelisa ngokukhawuleza isisu emva kokubeletha
Ukuvuma, ngenxa yesisu okanye isisu akukho umahluko emva kweentlobo okanye ukukhangela okanye cha. Ubunzima bokuzilolonga kumaphephandaba kufana nabo bonke abafazi. Ngomlinganiselo ophela kukuba emva kokukhulelwa kwiiveki ezi-4 kungcono ukungena kwimidlalo ngokusemthethweni. Kulo lonke - yonke into iyimilinganiselo. Ubunzima bokuzivocavoca ukukhupha isisu emva kokubeleka ngexesha elifutshane lilandelayo:
Iipelvic iphakamisa. Uxoxe emhlane wakho, uguqa ngamadolo. Khuphula i-pelvis phezulu, ubambe imizuzwana eyi-10, ubuyele kwindawo yokuqala. Phinda kathathu.
Ukuphikisana nokushicilela. Uxoxe emhlane wakho, uguqa amadolo, udlulise iingalo zakho phezu kwesifuba sakho. Ekuphumeni kwamanzi akhombe amahlombe akho phantsi, usebenzisa iisisu zomzimba kuphela. Kwi-inhalation, buyela kwi-IP. Phinda amaxesha angama-20.
Ukuqhankqalaza eludongeni. Gcina ngokuqinisekileyo umva wakho kumdonga, imilenze yenza isinyathelo phambili. Ncipha kancane uze udolo lwama-90 ° C. Gcina imizuzwana eyi-10. Buyela kwi IP. Phinda amaxesha ama-5-10.
Planck. Thetha kwisisu sakho, uphumule kwizinto eziphambili zakho kunye neesokisi. Yulawula umtya kwaye ulula zonke iintlobo ezikhoyo. Gcina imizuzu engama-1. Phinda kathathu.
Indlela yokucoca isisu emva kwesigaba sephepha lokutya kunye nokutya
Ukubuyisela isibalo emva kokubeleka kunye nokuba yinto enhle kwaye ilunge, njengaphambili - umnqweno wemvelo ngamnye wesifazane. Kodwa kukho iinkqubo ezingekho phantsi kwezemvelo zomzimba kunzima ukuphikisana. Emva kokuhlinzwa, umzimba udinga ixesha elide lokubuyisela. Kwaye ukuzikhandla emzimbeni kwimihla yokuqala kubangelwa yimiphumo emibi. Ukubeka nje, iinyanga ezi-3-4 zokuqala ezivunyelwe ngokubanzi naluphi na uqeqesho olujolise ekuqiniseni isisu esiswini. Kodwa kusekho indlela yokuphuma. Susa isisu emva kwecandelo lesahla ekhaya lingadla ngokutya. Okokuqala, oku kunokwaneleyo, kwaye ngexesha elifanelekileyo kuya kwenzeka ukuba udibanise izenzo ezilula kwinkqubo.
Indlela yokulahlekelwa isisindo kwaye uhlambulule isisu emva kwecesarean section ngaphandle kokuzivocavoca
Ukusebenzisa imithetho emininzi yeprayimari, unako ukunciphisa ubunzima emva kwecandelo lecandelo kunye nokucoca isisu ngaphandle kokuzivocavoca.
Okokuqala, kuyimfuneko ukulungelelanisa ukulinganisa ukutya. Nge-HS, ukutya okuthethileyo akuvumelekile, kodwa ukutya okufanelekileyo kuya kuba kunye kunye nosana. Ungadli iimveliso zempuphu, iimveliso zebisi ezinomsola ezinomsoco, iipesele, inyama enamafutha kunye neentonga ezingaphezulu. Eziphambili ziyizilimo, imifuno, iziqhamo zonyaka, ii-fat cottage cheese, isibindi, inkukhu, njl;
Okwesibini, kudla ngokuphindaphindiweyo ukuhamba epaki kunye nomqhubi. Inkcitho yeekhalori iya kwanda - kwaye ubuninzi be-fat mass accumulated in the stomach ziya kuhamba kancane;
Okwesithathu, kufuneka ufumane ukulala ngokwaneleyo rhoqo. Ngenxa yokungabikho kokulala, umzimba uvelisa i-hormone cortisol, ukukhawuleza ukuqokelela kwamafutha esiswini;
Okwesine, ngokuqhelekileyo kuthatha isilwanyana esichaseneyo (ngaphandle kwe "intlanzi" yamanzi ashushu). Le nkqubo ikhuthaza ukujikeleza kwegazi, kwaye ngenxa yoko-kukuchaphazela ngokuqinisekileyo imetabolism, inkqubo ye-endocrine, imeko yesikhumba.
Indlela yokukhawuleza ukulahleka isisindo nokucoca isisu sakho ngeveki
Ukuba akukho zibonakaliso zonyango ngenxa yokwala ukuthatha inxaxheba kwimidlalo, unokukhawuleza ulahlekelwe isisindo kwaye ususe isisu sakho kwiveki nje. Akungathandabuzeki, ngenxa yale nto uya kufuneka ulahle ukutya okunamandla kunye nokwanelisayo, kunye nokujuluka okukhulu. Kodwa umdlalo ufanele ikhandlela. I-Aspen isile ikhangeleka kakhulu kwaye ikhangeleka ngaphezu kwamacala amaninzi, ikhupha ngaphezu kwebhanti yeeans. Musa ukulibala ukuba umnqweno wokunciphisa umzimba kwaye ususe isisu ngexesha elincinci lokusongela iziphumo ezingathandekiyo ngesikhumba sokuqhawula kunye nokucaciswa ngokucacileyo. Kukhuselekile ukunciphisa ubunzima ngokuthe ngcembe, ukuvumela ulusu ukuba ludibaniswe ngokwasemzimbeni. Kodwa yintoni kuphela umphefumlo womfazi ongayi kuyenza!
Izenzo eziphumelelayo zokuphelisa isisu nokulahleka kokunyuka kwesisindo kweveki enye
Ngezantsi iisethi zokuzivocavoca ngokukhawuleza nokulahleka isisu esikhulu esifanelekileyo kumantombazana amancinci kunye nabasetyhini abaqinileyo. Ukwahlukana kuphela kwinani leendlela kunye nokuphindaphinda kwiinqanaba zokuqala zoqeqesho.
"Ibhayisikili". Ulale emhlane wakho, pha kamisa iinyawo zakho ngaphantsi komgangatho ukuya kwi-15-20 cm. Phakamisa umlenze owodwa okanye enye enye, uthabathe umgca wesandla esicacileyo ngamadolo. Ngaba i-2 ihamba ngamaxesha angama-20.
Izitrasi ngokulinganisa. Thatha isilumkiso esandleni sakho kwaye uncike kwelinye icala. Emva koko tshintsha umthwalo kwelinye icala uze uqhubeke nenkqubo. Phinda 2 iindlela ezili-15-20 maxesha.
Squats. Ukwandisa ithoni yeesisu zomzimba, ama-squat amaxesha angama-25 (2 isondela).
Ukunyuka kwemilenze. Beka phantsi, faka izandla zakho kunye nomzimba. Imilenze echanekileyo iphakanyiswe kwi-90C kwaye uzama ukuphakamisa i-pelvis usebenzisa iisundu ze-press. Yehla kwi IP. Ngaba i-2 ihamba ngamaxesha amahlanu.
Indlela yokususa isisu kumntu emva kwe-30, 40, iminyaka engama-50 kunye nantoni na yokuzikhethela ukulahleka kwesisindo
Amadoda amaninzi awaxhaswanga ngama-5-10. Ngokuphambene noko, abanye babo bayaqiniseka ukuba ngexesha elithile "isisu esisisigxina" sibazukisa. Ukuqwalaselwa kuphela xa "ubungqina" bengakuvumeli ukuba ungene kwiincindi zakho okanye uhlalise ilwandle ngokuphumla ngaphandle kweengcamango zokungathemba ngabasetyhini obuhlukile. Ukuqhaqhazela ukukhanya kukuqala nje kumnandi, kodwa ngokugqithiseleyo ixesha likhula libe yintlungu. Emva koko iingcinga zokuqala zibonakala, indlela yokulahleka isisindo kwaye ususe isisu kumntu emva kwe-30, 40, iminyaka engama-50, kwaye yiyiphi indlela yokuzikhethela ukulahleka kwesisindo esiphuthumayo. Eyokuqala, kufuneka uqale ukususa imbangela yenkinga. Ngokuqhelekileyo yile:
Ngoko ke kukufanelekile ukuzama ukuhlambulula isisu kunye namacala, usebenzisa iindlela ezahlukeneyo ezikhuselekileyo kumadoda emva kweminyaka engama-30, 40 no-50. Oko kukuthi:
Hlaziya ukutya (ngaphandle komgubo, ocoliweyo, othosiweyo, oqingqiweyo, ococekileyo)
Utywala kwi-shelf yangemuva
Beka injongo yenyanga
Qhubela kwizigaba zokuqala zomsebenzi
Misela ubuninzi bomzimba obunamafutha
Izindlela ezifanelekileyo zokuzilolonga amadoda ukuba zisuse isisu kunye namacala ngexesha elifutshane
Izenzo ezinempumelelo kakhulu zamadoda, ukuncedisa ngexesha elifutshane ukucoca isisu kunye namacandelwana anokuqokelelwa kwincinci encinci kwaye iphindwe kabili ngeveki, ngokunyuka kwandisa umthwalo.
Ukugijima kwindawo elele phantsi;
Ukuphakamisa i-trunk, elele ngasemva;
Ukuphakamisa imilenze xa ulele emhlane wakho;
Ukuphakamisa imilenze kwi-crossbeam okanye kwimivalo;
Xa uneminyaka engama-30, iminyaka engama-40 okanye engama-50, qalisa ubunzima bunzima ukusuka kwindlela enye kwaye ungaphinda uphindaphindiwe kwi-15-20 ngokuphindaphindiweyo. Emva kokuba ubunzima beesisipha kwisisu buqina, inani lokuphindaphinda kunye neendlela zinganyuswa. Indlela yokuhlambulula isisu kunye namacala ekhaya ngexesha elifutshane liyinkinga ebuhlungu nje kuphela kubafazi emva kokunikezelwa okanye kwinqanaba leloarean, kodwa nakwabantu abanobudoda abaphila ngendlela yokuhlala. Ngethamsanqa, ngoncedo lwesondlo esifanelekileyo, imikhwa emihle kunye nokuzivocavoca okusebenzayo, unokukhawuleza ulahlekelwe isisindo kwaye ususe amanqatha kwisisu sakho kwiveki nje.
Indlela yokuhlala kwi-twine: isipiliyoni semidlalo sika-Alena Khmelnitskaya
Yintoni intuition kunye nendlela yokuphuhlisa ngayo?
Iinkwenkwezi eziphezulu ze-7 zaseRashiya, ezithengiswa ngamajelo ngexesha lokuphila kwazo
Iingubo zoboya zabesifazane
U-Ekaterina Klimova okhulelwe uhamba nomyeni wakhe
Ukupheka kunye neengcebiso eziphekayo zokupheka i-squid